Rayson | intengo ye-duroflex spring umatilasi
Kwa-Rayson, ukuthuthukiswa kobuchwepheshe kanye nokuqamba izinto ezintsha kuyizinzuzo zethu eziyinhloko. Selokhu sasungulwa, besigxile ekuthuthukiseni imikhiqizo emisha, ukuthuthukisa ikhwalithi yomkhiqizo, nokusebenzela amakhasimende. Intengo kamatilasi wasentwasahlobo we-duroflex Sinabasebenzi abangochwepheshe abanolwazi lweminyaka embonini. Yizona ezihlinzeka ngezinsizakalo ezisezingeni eliphezulu kumakhasimende emhlabeni wonke. Uma unanoma yimiphi imibuzo mayelana nentengo yethu entsha yomkhiqizo we-duroflex spring noma ufuna ukwazi okwengeziwe ngenkampani yethu, zizwe ukhululekile ukusithinta. Ochwepheshe bethu bangathanda ukukusiza nganoma yisiphi isikhathi.Ifaka ukunethezeka okushisayo. Imicu eyakha lo mkhiqizo inokumunca umswakama ofanele futhi iyakwazi ukumunca umswakama ovela emzimbeni, ngakho-ke inomthelela ekuthokomeleni kokushisa.